LAPAN’NY TANANA VAOVAO (Antananarivo) | GAZETY_ADALADALA
LAPAN’NY TANANA VAOVAO (Antananarivo)
Posted on 17/05/2008 by gazetyavylavitra
Natao androany 17 mey 2008 teo amin’ny kianja malazan’ny 13 mai ny fametrahana tamin’ny fomba ofisialy ny vatofehizoron’ny lapan’ny tananan’Antananarivo vaovao. Tsy nahasakana ny olona ny erikerika vao maraina fa tamin’ny valo ora dia efa feno olona Analakely. Tonga teny kosa ny Ben’ny tanana tamin’ny folo ora katroka. Tonga teny koa ny solontenan’ny vatican (Augistin K.),ny tahirim-bola iraisam-pirenena, ny banky iraisam-pirenena sy ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena samihafa. Ny solontena vahiny miasa sy monina eto amintsika, masoivoho vahiny toy ny avy any amin’ny vondrona eropeana, Frantsa, senegal, allemagne, ny fiaraha-monim-pirenena, RAJEMISN rakotomaharo filoha lefitry ny Antenimieran-doholona, ny solombavambahoaka voafidy teto Antananarivo renivohitra, sy filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena Mamy Rakotoarivelo.
Banga kosa ny toerana natokana ho an’ny mpikambana ao amin’ny gouvernemanta.
Maro koa ireo mpanao gazety vahiny tonga nanatrika ny fotoana.
Tsy nisy tonga kosa na i Guy Willy Razanamasy,na Marc Ravalomanana,na Patrick Ramiaramanana izay efa samy Ben’ny tanana nitondra ity tanana ity
Ny endrika ivelany dia ezahana tsy dia hiova firy na dia nasiana fanatsarana ihany aza, fa ny ao anatiny kosa dia hiova. (Hitanao ao amin’ny Flickr Avylavitra ireo sombin-tsary teny an-toerana). Nosorohana tamin’ny ampahany lehibe ihany ny zaridaina ary navela amin’ny toerany kosa ny trano fivoahana. Misy fampirantiana ny tantara eo an-toerana ary nolazain’ny tompon’andraikitra fa andro vitsy ihany no mety hipetrahan’izany eo mba ho fisorohana ny hetraketraky ny mpanimba. Ilay sary lehibe miantona ery ambony kosa dia tsy hiala intsony fa ho tazanin’ny mpandalo eo maraina sy hariva
Feno olona nanodidina ny kianja, ary notapahana ireo lalana rehetra miditra eo amin’ny araben’ny fahaleovan-tena mandra-pahatapitry ny lanonana.
Toy izao ny lahatenin’ireo vitsivitsy nandray fitenenana. Marihana fa ny Talen’ny kabinetran’ny Ben’ny tanana no nandray an-tanana ny fandaharam-potoana teny an-kianja, nampian-dRamatoa Maholy
Fidy Ratsimbazafy, filohan’ny Faritra no nisolo tena ny fitondrana: « …Antananarivo no lahimatoan’i Madagasikara, koa tsy maintsy hataontsika rehetra ho vaindohan-draharaha ny fikarakarana sy fanatsarana izany tanana izany. Koa matokia ianareo fa ny fitondram-panjakana dia eo anilanareo mandrakariva ary mpiara-miombon’antoka amin’izany fampandrosoana ny tanana izany. Ny soa fianatra, koa tokony ho fianarana ho an’ny hafa izao ezaky ny tanan’Antananarivo izao ho fanarenana ny vakoka nentin-drazana, sy ny soatoavina Malagasy. Manolotra fisaorana manokana ho an’ireo angady nananana sy vy nahitana ny ho enti-manana izao asa fanarenana izao. »
Fihavanana, firaisan-kina ary fitiavana io no teny filamatra entin’ny Ben’ny tanana manorina izao asa izao. Efa azo ampiasaina avy hatrany ny 50 isan-jato amin’ny vola nomen’ireo mpiara-miombon’antoka hoy izy, izay tsy iza fa ny tanana’Antananarivo Renivohitra, ireo mpanampy avy any ivelany ary ny fitondram-panjakana izay nanome vola ihany koa ho fanampiana amin’ny fanatanterahana azy.
Hoy ny Ben’ny tanana fahafito mitondra ny tananan’Antananarivo,
Andriamatoa Andry RAJOELINA: » Miara-manoratra ny tantara isika rehetra ankehitriny, Foto-kevitra telo no entina hanorenana ny vatofehizoron’ny asa izay ho tanterahantsika dia ny « fihavanana, ny firaisankina ary ny fitiavana. Ny fihavanana dia milaza fa iray ihany isika: firaisankina satria hanao soroka miara-milanja ary tongotra miara-mamindra ary Fitiavana satria io no fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra nomena antsika olombelona. Ho porofoina fa isika miaraka dia hery lehibe. Tombony ho antsika izany. Ny lapa tokoa mantsy no maha-tanana, ka tokony homen-danja ny renivohitr’i Madagasikara, ho reharehan’Antananarivo ary ho lova hapetraka ho an’ny taranaka fara mandimby. Koa vonona sy resy lahatra aho ary hampiasa ny fahaizako sy ny heriko manontolo mba hanatsarana sy hampandrosoana ity tananatsika ity ho Antananarivo maoderina. Antananarivo maoderina, tanana mifototra sy mijoro amin’ny fahendrena Malagasy. Miara-miasa ny mponina rehetra mba hivelarany, ary hisokatra amin’ny hafa ihany koa mba hahafahana manatratra ny tanjona.
Fanombohana ihany io hoy ny ben’ny tanana Andry RAJOELINA fa mbola be ny ho avy, izay tsy voatery (tsy tsara) ny holazaina dieny izao.
Nanentana moa ny Ben’ny tanana ny amin’ny tokony hiovan’ny teo-tsaina mba tsy ho faly manimba zavatra lava izao. Ka ho lany andro amin’ny fanarenana foana.
Hoy kosa ny Rev. Pasteur Andriamanjato Richard (ben’ny tanana taloha) :
…nisy trano lehibe teto ivoho teto dia taty amin’ny lafiny avaratra nisy ny birao nantsoina hoe ny prezidan’ny antenimieran’ny tananan’Antananarivo dia ny tenanay izany, taty tamin’ny lafiny atsimo nisy ny biraon’ny antsoina hoe delege general du gouvernement izay napetraka hitantana ny fanatanterahana ny asa tato amin’ny tananan’Antananarivo araka ny rafitra izay natao tamin’ny repoblika voalohany. Tsy hitanisa ireo samihafa nitranga aho, fa ny tian-ko tsiahivina fotsiny etoana eto anoloanareo besinimaro mponina eto amin’ity faritra ity, eto Antananarivo, sy isika rehetra izay miandraikitra ny fandehan’ny tantaran’ny firenena, na aiza na aiza misy antsika ary na inona na inona toerana izay sahanintsika indrindra indrindra fa eo amin’ny fiandraiketana ny firenena izany, ho antsika rehetra dia hoe, izay tiako hampahatsiahivina fotsiny dia ny hoe, izany lapan’ny tananan’Antananarivo izany dia vavolombelon’ny dingana maro samihafa natao amin’ity tanana ity…may tao ny boky volamena izay isan’ny rakitry ny tantara sarobidin’ny tanana sy ny firenena satria tao no fametrahan’ireo olo-malaza ny soniany rehefa nandalo teto Madagasikara izy ireny. Isan’izany ny Jeneraly DE Gaules izay indroa nanoratra tao.
Hoy indray RASAMISON Odette L (mpiatantsoratra farany talohan’ny fahamaizan’ny lapa taloha) :
» mpitantsoratra tranainy tao amin’ny lapan’ny tanana tamin’izany fotoana izany, teo am-perinasa no naheno ny tabataba sy ny horakoraka taty ivelany. Niaraka tamin’ireo mpisora-panambadiana maromaro tamin’izany fotoana izany. Taitra aho tamin’izany ary nitsidika teo am-baravarankely. Nahita tsara tamin’izany fotoana izany ny ra latsaka, ny tapa-tongotra, ny maty. Nitsipatsipaka toy ny valala ireo taranaka nentina nangataka ny zony..izany no valin’ny fangatahany. Kanefa tamin’izany tsy nisy mbola afaka nanome izany valinteny izany fa dia mbola niahotrahotra teo daholo ry zareo. Nandritr’izay fotoana izay anefa an! nihorakoraka ny ankizy. ny FRS kosa tamin’izany teny an-davarangana miaraka amin’ny lacrymogenes, basy….Ireo taranaka dia tsy nisy afa-tsy tanam-polo teny an-tanany »
Rehefa vita ny fisaorana sy fandraisan-tanana ireo vahiny manan-kaja sy solotenan’ireo masoivoho vahiny dia nidina nandray tanana ireo vahoaka marobe nanamorona sy nanodidina ny sehatra ny Ben’ny tanana Andry RAJOELINA.
Isan’ny nasaina sy nanome voninahitra ity fotoana ity ny zanak’Itompokolahy RAKOTONIRINA Stanislas, Ben’ny tanana voalohany indrindra teto Antananarivo, dia Andriamatoa RAKOTONIRINA Adrien izany.
Tsara ny manamarika fa rahampitso 18 mey 2008 dia hanomboka avy hatrany ny fanarenana ity lapan’ny tananan’Antananarivo ity. Haharitra roa taona ny asa fanamboarana ka mpanao tao-trano avy any ivelany (izany PARDON izany no hiandraikitra azy) miaraka amin’i Mamy RAJAOBELINA. Mitentina 12 milliars de FMG ny vola novinavinaina ho lany amin’izany
Vakio ato na ato ny tononkalo nentin’i RADO nanamarika iny fotoana iny
Filed under: fiaraha-monina, tantaram-pirenena, tapatapany | Tagged: 13 mai, Andry RAJOELINA, Antananarivo, hotel de ville, lapan'ny tanana, mai72, maire, maireir |
« CEG ANTANIMENA LASA OMALY I RAKOTONIRAINY Jean Richard »
jentilisa, on 18/05/2008 at 2:38 said:
eny ho’aho, sady toa mety hampivonto fo ny fitondrana anie izany tononkalon’i Rado izany e
tomavana, on 21/05/2008 at 11:20 said:
Misaotra amin’ny tatitra sy ireo sary fa ohatry ny mba nanatri-maso mihitsy izahay « avylavitra » 🙂